မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဆိုတာ - Tameelay
ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ လက်ထဲက ကစားစရာ အရုပ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
မာနတရားကို လက်ကိုင်မထားဘဲ နေမိရင် ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် သဘောထားတာ ကြုံရတတ်တယ်။
အဖြေလွယ်လွယ်ပေး သဲသဲ လှုပ်ချစ်ပြရင် ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ အထင်သေးတာ တန်ဖိုး မထားတာ ခံရမယ်။
ခပ်ပျော့ပျော့ ခပ်တုံးတုံးအထာ ဖြစ်ပြရင် ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ လှည့်စားတာ အကွက်ရွှေ့တာတွေ ခံရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြတ်သား ရက်စက်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်…
ကိုယ့်ဘဝကိုလည်း အသက်ထက် ပိုချစ်တတ်ရမယ်…
အကြောတင်းသင့်တင်း မာနကြီးသင့် ကြီးပြတတ်ရမယ်… အသေအလဲ ချစ်နေရင်တောင် မုန်းဟန်ဆောင် တတ်ရမယ်…
မိန်းကလေး ဖြစ်ရတာ ဘယ်နေရာမှ မနိမ့်ကျပါဘူး… ဘုရားကပေးတဲ့ အလှအပတရားတွေ အကုန်ပိုင်ဆိုင် ထားတယ်…
နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံ ရှိထားတယ်…
ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့် ရထားတယ်။ မချစ်ရင် ငြင်းခွင့်ရှိတယ်။
မုန်းရင် လှည့်မကြည့်ခွင့် ရှိတယ်… ဖြစ်ချင်တာတော့ ဖြစ်ခွင့် မရှိဘူး
ဖြစ်သင့်တာတော့ ဖြစ်ခွင့် ရှိတယ်… ရွေးချယ်မှု မမှားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်…
မှားခဲ့ရင်တောင် အချိန်မှီ ပြန်ထ တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
လောကမှာ ရှင်သန်ဖို့ဆိုရင် ခြင်္သေ့လို ရဲရင့်ပြဖို့လည်း လိုတယ်လေ… အမှား ရှိခဲ့တိုင်းလည်း အပြစ် မဟုတ်ဘူး။
တစ်ချို့အမှားတွေက သန့်ရှင်းပါတယ်… မသိလို့ မှားခဲ့မိတာရယ် မနူးမနပ်နဲ့ ငယ်သေးလို့ မှားခဲ့မိတာရယ်ကြောင့်ပါ…
အဲ့အမှားထဲက အချိန်မှီ ပြန်ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ပဲ လိုတာ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့ အားနွဲ့တဲ့ စိတ်ထားတွေ ခေတ်ဟောင်းမှာ ဝဲလိုက်တော့
ရဲရင့်ဝင့်ကြွားတဲ့ တတ်ကြွရွှင်လန်းတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်အောင် နေလိုက်ပါ
ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ လကျထဲက ကစားစရာ အရုပျ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ။
မာနတရားကို လကျကိုငျမထားဘဲ နမေိရငျ ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ ပေါ့ပကျြပကျြ သဘောထားတာ ကွုံရတတျတယျ။
အဖွလှေယျလှယျပေး သဲသဲ လှုပျခဈြပွရငျ ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ အထငျသေးတာ တနျဖိုး မထားတာ ခံရမယျ။
ခပျပြော့ပြော့ ခပျတုံးတုံးအထာ ဖွဈပွရငျ ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ လှညျ့စားတာ အကှကျရှတေ့ာတှေ ခံရမယျ။ တဈခါတဈရံ ပွတျသား ရကျစကျတတျဖို့လညျး လိုတယျ…
ကိုယျ့ဘဝကိုလညျး အသကျထကျ ပိုခဈြတတျရမယျ…
အကွောတငျးသငျ့တငျး မာနကွီးသငျ့ ကွီးပွတတျရမယျ… အသအေလဲ ခဈြနရေငျတောငျ မုနျးဟနျဆောငျ တတျရမယျ…
မိနျးကလေး ဖွဈရတာ ဘယျနရောမှ မနိမျ့ကပြါဘူး… ဘုရားကပေးတဲ့ အလှအပတရားတှေ အကုနျပိုငျဆိုငျ ထားတယျ…
နူးညံ့သိမျမှတေဲ့ နှလုံးသားတဈစုံ ရှိထားတယျ…
ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျ့အနာဂတျကို ကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြခှငျ့ ရထားတယျ။ မခဈြရငျ ငွငျးခှငျ့ရှိတယျ။
မုနျးရငျ လှညျ့မကွညျ့ခှငျ့ ရှိတယျ… ဖွဈခငျြတာတော့ ဖွဈခှငျ့ မရှိဘူး
ဖွဈသငျ့တာတော့ ဖွဈခှငျ့ ရှိတယျ… ရှေးခယျြမှု မမှားဖို့တော့ လိုလိမျ့မယျ…
မှားခဲ့ရငျတောငျ အခြိနျမှီ ပွနျထ တတျဖို့လိုအပျတယျ။
လောကမှာ ရှငျသနျဖို့ဆိုရငျ ခွင်ျသလေို့ ရဲရငျ့ပွဖို့လညျး လိုတယျလေ… အမှား ရှိခဲ့တိုငျးလညျး အပွဈ မဟုတျဘူး။
တဈခြို့အမှားတှကေ သနျ့ရှငျးပါတယျ… မသိလို့ မှားခဲ့မိတာရယျ မနူးမနပျနဲ့ ငယျသေးလို့ မှားခဲ့မိတာရယျကွောငျ့ပါ…
အဲ့အမှားထဲက အခြိနျမှီ ပွနျရုနျးထှကျနိုငျဖို့ပဲ လိုတာ
မိနျးကလေးတဈယောကျမို့ အားနှဲ့တဲ့ စိတျထားတှေ ခတျေဟောငျးမှာ ဝဲလိုကျတော့
ရဲရငျ့ဝငျ့ကွှားတဲ့ တတျကွှရှငျလနျးတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈအောငျ နလေိုကျပါ
ဘာတွေ အဆင်မပြေဖြစ်နေလဲ..? သပြေ ၃ ခက်ကိုသာ ဒီလို စီရင်လိုက်ပါ…
အလုပ်ကိစ္စ အဆင်ပြေပြီး စီးပွားတက်စေဖို့ သပြေ ၃ ခက် အစီအရင် !!!! သပြေဟု အမည်ရှိသည့် အညွန့်သည် လူသားတို့အား အထူးအကျိုးပေးသည်။ အရာရာ အောင်စေတက်သော သလောရှိခြင်းကြောင့် အောင်သပြေဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ကပ္ပလင်္ကာရကျမ်း အရ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံး ပေါက်သောအပင်မှာ သပြေဟုဆိုထားပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ …
ဒီတိုင်းလေး ချစ်တဲ့သူကို သတိရမယ် ( အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေး ၁ မိနစ်အချိန်ပေးပြီး ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်နော်)
❖ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုသတိရတဲ့အခါ ပျော်ခဲ့ ပါးခဲ့ ကြည့်နူးခဲ့တာတွေကို သတိရမနေဘဲနဲ့ … ပျော်ချင် ပါးချင် ကြည်နူးချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ သတိရမနေဘဲနဲ့ … ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာလေးပွားပြီး သတိရနေမယ်ဆိုရင် စိတ်အေးချမ်းသွားပါတယ်။ ❖ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့သူကို ကိုယ်ချစ်ခဲ့ ကြည်ညိုခဲ့တာတွေ ကိုယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ သူညီခဲ့တာတွေ ကိုယ်ပေးကမ်းခဲ့ …